Madaxweynaha Jubbaland oo soo Sagootiyay Xildhibaanadii Lagu Doortay Magaalada Kismaayo (SAWIRRO)
December 13, 2016 – Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa Munaasabad heerkeedu sareeyo magaalada Kismaayo ugu qabtay xubnaha labada Aqal ee lagu soo doortaymagaalada Kismaayo.
Munaasabadan oo sagootin ahayd ayaa waxaa ka qayb galay Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib iyo xubnaha labada gole ee maamulka Jubbaland iyo Mudanayaasha la doortay.
Gudoomiyaha Gudiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka heer Dowlad Goboleed Cabdi Cali Raage ayaa Munaasabada kaga sheekeeyay marxaladahii ay soo martay hawsha dhismaha labada Aqal ee maamulka Jubbaland lagana soo doortay isagoo Dowlada Jubbaland uga mahad celiyay sida ay tageerada ula garab taagneyd, waxaana uu hoosta ka xariiqay in ay sidii ugu wanaagsanayd hawshu u dhacday oo ay rajaynayaan in Xildhibaanadan ay noqdaan kuwo dalkooda iyo dadkooda anfaca.
Qaar kamid ah Xildhibaanada oo Munaasabada ka hadlay ayaa ka mahad celiyay amaanka iyo Nabadgalyada la isku halayn karo ee Kismaayo ay ka heleen iyagoo Dowlada ku amaanay sida ay uga go’an tahay Midnimo, Cadaalad, iyo Hanaanka maamulka Suuban.
Madaxweynaha Jubbaland Mudane, Axmed Maxamed Islaam oo isagana munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku dheeraday sida ay masuuliyada ay qaadeen uga soo bixi lahayeen Xildhibaanada Cusub wuxuuna xusay in ay Jubbaland ku dadaalayso sidii Xildhibaanada deeganku u noqon lahayeen kuwo isku xiran oo hal hadaf leh waxaana uu cadeeyay in taasi ay miro dhashay oo hada ay gudi samaysteen Xildhibaanadu kuwaas oo wixii soo wajaha ay si midnimo leh go’aan uga gaarayaan.
Sidoo kale Waxaa Madaxweynahu uu balan qaaday in hada kadib laga tashan doono in wixii jira ee masiirka dalka ku saabsan si guud looga tashado oo qaab Xisbi ah lagu wajahi doono dadka deegankuna ay u dhan yihiin.
December 13, 2016 tuugahaladilo2015
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland oo Booqday Darbiga ay Kenya ka Dhisayso Xuduuda Soomaaliya (SAWIRRO) September 17, 2017
Shabaab oo Saakay Aroortii Weerar Culus ku Qaaday Xarun Ciidan oo ku Taala Deegaanka Buulo Gaduud September 3, 2017